Semalt Expert mamelabelatra ny fomba hanakanana ny fifamoivoizana an-tserasera BlackHatWorth
BlackHatWorth.com dia endrika vaovao momba ny tranonkala referrer izay mitsambikina ny tranokalantsika. Ity spam referrer ity dia nahatonga ny Google Analytics, JetPack, Bing Analytics, ary ny kaonty Yandex Analytics.
Artem Abgarian, mpanazatra ambony indrindra avy amin'ny Semalt , no manamarika fa zava-dehibe ny mandrina sy manakana ny fandefasana spam blackmart.com amin'ny fisehoan'ny Google Analytics.
Inona ny BlackHatWorth - pisco nazca tour.com?
BlackHatWorth.com dia sehatra vaovao noforonina tamin'ny Janoary 2015. Ampiasaina ho an'ny spam referrer amin'ny vondrona hackers izany. Io tranonkala spam referansy io dia miafina ao ambadiky ny sehatry ny tranokala malaza sy sary mahafinaritra. Olona maro no mihevitra fa tranonkala ara-dalàna io ary manana tranonkala finday ho an'I Yandex sy Google ny tranonkala, ary koa ireo tranonkala fanentanana malaza amin'ny alàlan'ny AliExpress.com, Amazon.com, Ebay.com, ary Alibaba.com. Ny adiresy IP an'ny BlackHatWorth.com dia 78.110.60.230. Toy izany koa ny fifandraisany amin'ireo tranonkala spam rehetra hafa toy ny Iskalko.ru, Lombia.co, Lomb.co, Econom.co, Priceg.com, Darodar.com ary ILoveVitaly.com.
Ny sehatra, BlackHatWorth.com, dia an'ny Rosiana iray. Izy no olona iray manana tranonkala spam toy ny ILoveVitaly.com, Darodar.com, ary Econom.co..Ny anaran'ny tompony ny faritanin'i Samaraskaya, ary izy dia nisoratra anarana (povitaly@mail.ru) ho an'ny asany spam.
Tokony hanakana ny BlackHatWorth.com!
Raha mpitoraka bilaogy vao haingana ianao na webmaster, mety hieritreritra ianao fa tsy ilaina ny fanakanana blackhatworth.com. Eny, diso ianao satria ny fifamoivoizana avy amin'ity tranonkala referrer ity dia hitarika ny tranokalanao hamoy ny karoka fikarohana . Noho izany dia tsy maintsy mandinika fitsaboana vitsivitsy mba hisorohana an'ity tranonkala spam ity sy loharano hafa amin'ny fandefasana anao fifamoivoizana sandoka.
BlackHatWorth.com sy spam crawlers hafa dia asongadina ao amin'ny kaonty Google Analytics sy ny kaonty Bing Analytics. Hampitombo ny taham-pitenenanao izy ireo ary hanolotra anao ny taham-pifandraisana ambany. Ankoatra ny fanesoana ny fanadihadihana ataonao sy ny fanimbana ny tranokalan-tserasera amin'ny findainao, ireo tranonkala fanamarinana spam toy ny BlackHatWorth.com, Econom.com, Priceg.com, Darodar.com, ary ILoveVitaly.com dia mety hihinana ny loharanom-pitaovanao ary ny bandwidth .
Raha efa nianatra momba ny spam sy ny sehatra misy anao ianao, toy ny BlackHatWorth.com dia azonao atao mora foana ny manakana izany ary miaro ny tranokalanao amin'ny Internet. Na mampiasa Joomla, WordPress, Zen Cart, Cartes Tomato na Drupal ianao, dia afaka misoroka mora foana ny spam referendra ao amin'ny cPanel. Manorata ao amin'ny kaontinao ary tsindrio ny safidin'ny File Manager. Sokafy ny rakitra .htaccess ary mamorona ny vaovao .htaccess. Ao amin'ny "public_html" folder izy io. Ampio ny code ary tehirizo ny fanovana.
Block BlackHatWorth.Com Spam referrer ao amin'ny Windows Server:
Raha tranokalan'ny Windows Server ny tranokalanao, azonao atao ny manakatona ny BlackHatWorth.com sy ny hafainganam-pandehanana hafa. Ampidiro ao amin'ny antontan-drakitrao ny tranonkalanao ary esory haingana araka izay azo atao ny spam.
Raha mitandrina ireo zavatra ireo ianao dia azonao atao ny manakana sy manakana ny spam BlackHatWorth.com sy spam hafa hafa. Raha te-hitandrina tsara ianao dia tokony hanakana ny URL manontolo, https://blackhatworth.com, mba hiantohana ny fiarovana ny tranokalanao. Azonao atao koa ny mampiditra ny mari-pamantarana ao amin'ny loha-lohanteny header.php eo anelanelan'ny teny fanalahidy lehibe.